एकाउन्टेन्टनै राखेर अपार्टमेन्टमा यौ’ नधन्दा : ढोकामा अत्याधुनिक ल’क कोड, रे’ट पनि कती म’हङ्गो ! – List Khabar
Home / समाचार / एकाउन्टेन्टनै राखेर अपार्टमेन्टमा यौ’ नधन्दा : ढोकामा अत्याधुनिक ल’क कोड, रे’ट पनि कती म’हङ्गो !
एकाउन्टेन्टनै राखेर अपार्टमेन्टमा यौ’ नधन्दा : ढोकामा अत्याधुनिक ल’क कोड, रे’ट पनि कती म’हङ्गो !
admin3weeks ago समाचार Leaveacomment 171 Views
काठमाडौं । प्रह’री नै ग्राहक बनेर ललितपुर महानगरपालिकाको का’साबेल अपार्टमेन्टको ५ औं तल्लामापुगेपछि बाहिरिएको घ’टना हो यो । अपार्टमेन्टमा पुग्दा प्रह’री नै चकि’त पर्ने कस्तो छ त यो घट’ना ?
प्रह’री ग्राहक बनेर अपार्टमेन्टमा पुगेपछि जब उनीहरुले प्रह’री ग्राहक नभएको थाहा पाएपछि उनीहरु ति’त्तरवि’त्तर भए । अपार्टमेन्ट ग्राहक बोलाउने र ध’ न्दा चलाउने कार्यालय बनाएको भेटियो । कोठाभित्र छिर्दा र’ क्सिका बोत्तल, अस्थायी साधन र लुगा छर.पस्ट थिए । प्रह’री भएको थाहा पाएपछि सबैले आफ्नो परिचय लुकाउन ना’तेदार भएको बहाना बनाए ।
प्र’हरीका अनुसार उनीहरुले अपार्टमेन्टमा यौ’ न ध’न्दा मात्र चलाएका थिएनन्, कमाएको पैसा मि’टरब्या’जमा लगाउने गरेका रहेछन् । यसका साथै उनीहरु मा’नव बेच’बि’खनमा समेत संलग्न रहेको प्रह’रीको अनु. सन्धानमा खुलेको छ । यौ’नध’न्दामा संलग्नलाई प्र’हरीले प’क्राउ गर्न सफल भए पनि मानव बे’चवि’खनमा सं’लग्नलाई प’क्राउ पूर्जी जारी गरेर खोजी भइरहेको प्रह’री जनाएको छ ।
अत्याधुनिक प्र’विधिबाट बनाइएको ढोकाबाट भित्र छिर्नु र बाहिरिनुअघि त्यहाँ सुरक्षित पा’सवर्ड जडान गरिएको प्रह’रीको भनाइ छ । प्रह’रीका अनुसार ढोकाबाट भित्र ल्याउने र बाहिर लैजान काम ग्राहक बनेर गएको महिलाले नै सम्हा’लेकी रहेछिन् ।
त्यसो त, प्र’हरीले अकाउन्टेन्ट (लेखापाल)लाई राखेर हिसाबकिताव मिलान गर्न लगाएको पनि भेटि’एको जनाएको छ । हालसम्म अपा’र्टमेन्टमा कति ग्रा’हक लगिन्थ्यो ? आउँथे ? भन्नेबारेमा प्र’हरीले अ. नुसन्धानमा फेला पारेको जनाएको छ ।
अकाउन्टेन्टको फायलअनुसार ३ वटा छुट्टाछुट्टै बुकिङ गरिएको फायल भेटिएको प्रह’रीको अनु. सन्धानमा खुलेको छ । प्रह,रीका अनुसार एकजना ग्राहक यौ’नसम्पर्क बापत् ३ हजा’रदेखि १५ हजारसम्म लिने र कमिसन बा’पत् ल्याउनेलाई २५ प्र’तिशत दिने गरिएको रहेछ ।
अपार्टमेन्टको ढोका नै पुग्न ६ म’हिना लागेको प्र’हरीले भदौ १ गते ७ जनालाई प’क्राउ गरिसकेको छ । हाल हिरा’सतमा रहेका उनीहरुमाथि प्र’हरीले थप अ.नुसन्धान गरिरहेको छ ।
प’क्राउ पर्नेहरुमा हेटौँडाकी ४२ वर्षीया गी’ता खड्गी, झापाका ५० वर्षीय रा’जेश अग्रवाल, रुकुमकी २३ वर्षी’या ललिता बिक, बर्दियाकी २९ वर्षीय सु’निल विष्ट, काठमाडौं बालाजुकी क्रिष्टिना केसी, सिन्धु’पाल्चोककी २५ वर्षीया नि’र्मला न्यौपाने र काभ्रे पनौतीका ३३ वर्षीय प्रती’क कर्माचार्य रहेका छन् ।
Previous रातभर भिजाएर बदाम खानुहोस्, केही दिनमै मिल्नेछ आश्चर्यजनक लाभ
Next आफ्नो प्रेमिका अथवा श्रीमतीको यस अङ्ग कहिले पनि नछुनुस् !